Zimbabwe: Court Acquits Biti's Lawyer, Aides - allAfrica.com
Karoi Magistrate Sam Chitumwa on Friday 31 May 2019 acquitted three aides of human rights lawyer and opposition political party leader Honourable Tendai Biti, who had been on trial for allegedly violating the country's immigration laws.
However, Magistrate Chitumwa found Mlilo, Rambanepasi and Chitekwe not guilty at the end of the State case and acquitted them after ruling that the State failed to disprove the trio's defence in which they stated that they were asylum seekers when they left the country to enter into Zambia at the time when Honourable Biti was hounded out of Zimbabwe.
Mlilo, Rambanepasi and Chitekwe, who were out of custody on $100 bail each, were arrested in August 2018 together with Honourable Biti and charged with contravening the country's immigration laws after they allegedly departed Zimbabwe on August 8, 2018 through an unauthorized port of exit.
The State led by prosecutor Gerald Dhamusi was however, forced to withdraw the main charge of departing from Zimbabwe from a place other than a designated port of entry as in its own submissions, Honourable Biti's alleged accomplices had "departed" Zimbabwe into Zambia through Chirundu One-Stop Border Post, a designated port of entry in terms of the paragraph 1 (Border with Zambia) of the Part III (Entry or Departure by Road), of the Schedule to the Immigration Regulations S.I195/1998).
In the scope of his investigations, Nyabasa said he wrote to the Immigration Department informing the officials of persons wanted by the police, which included Honourable Biti and requested them to alert its border posts to be on the lookout for the people on the ZRP wanted list in case they attempted "to skip the border".
Nyabasa claimed that he received information that Honourable Biti had been seen at Chirundu One-Stop Border Post on the Zambian side, prompting him to depart for Chirundu, where two Immigration Department officers, Florence Nyathi and Morgan Moyo handed Honourable Biti and his alleged "accomplices" who had allegedly been deported from Zambia.
Nyabasa failed to convince the court that Honourable Biti's alleged "accomplices" could not claim to be seeking asylum as a result of political persecution since they were not on the police wanted list.